အိမ်တွင်းပြဇာတ်ရုံအဆင့်မြှင့်တင်မှုနှင့် Big 2016 ဂိမ်းကြည့်ရှုရန်အခွင့်အလမ်းများ၊ Adorama တွင်သာ။ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » မူလစာမျက်နှာပြဇာတ်ရုံအဆင့်မြှင့်မှုများနှင့်သာလျှင် Adorama မှာ, Big 2016 ဂိမ်းကိုကြည့်ပါရန်ပိုမိုအခွင့်အလမ်းတွေကို
မူလစာမျက်နှာပြဇာတ်ရုံအဆင့်မြှင့်မှုများနှင့်သာလျှင် Adorama မှာ, Big 2016 ဂိမ်းကိုကြည့်ပါရန်ပိုမိုအခွင့်အလမ်းတွေကို
များအတွက်တိုးချဲ့နောက်ဆုံးနေ့ Adorama နှင့် Intel က'' s ကို 50th နှစ်ပတ်လည်နေ့နဲ့ Big ဂိမ်း giveaway; တစ်ဦးဖြစ်လာ Adorama VIP ထို့နောက် LG ကသို့မဟုတ် Samsung ကနေခြေစစ်ပွဲတီဗီဝယ်ယူရန် - ရောင်းချခြင်းအပေါ်ယခု - 3x များအတွက် entries တွေကို; ပြိုင်ပွဲ entry ကိုဇန်နဝါရီလ 31st အဆုံးသတ်
နယူးယောက်, နယူးယော့ - ဇန်နဝါရီ 29, 2016 - Adorama, ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဓာတ်ပုံ, ဗီဒီယို, အသံ, ပုံရိပ်နှင့်အီလက်ထရွန်းနစ်လက်လီအရောင်းဆိုင်များ၏တဦးတည်း, ဇန်နဝါရီလ 2016 သည်အထိက၎င်း၏နှစ်ပတ်လည်နဲ့ Big ဂိမ်း 31 giveaway တိုးချဲ့နေသည်st။ အိမျကနေစောင့်ကြည့်သူတို့အဘို့, Adorama ယခု LG ကနှင့် Samsung ကနေမတ်, OLED, 3D နှင့်ကွေးတီဗီအပါအဝင်ဒီနေ့ရဲ့အပူဆုံးအိမ်ပြန်ပြဇာတ်ရုံကုန်းပတ်ပေါ်တွင်အဓိကကျသည့်အထူးလျှော့စျေးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ဖြစ်ပါတယ်။ တို့ကကမကထပြု Intel ကအဆိုပါ 3rd စနေနေ့ဖေဖော်ဝါရီ6အပေါ် Celebrity အလံဘောလုံးပြိုင်ပွဲChallenge®နှစ်ခု VIP လက်မှတ်နှင့်အတူနှစ်စဉ်ပြိုင်ပွဲအလိုတော်ဆုမျိုးစုံဆုရရှိသူthအဆိုပါ 50 နှစ်ခုအဘို့, entry ကိုth တနင်္ဂနွေ, ဖေဖော်ဝါရီလ7အပေါ်နှစ်မြောက် Big ဂိမ်းthSanta Clara ကယ်လီဖိုးနီးယားမှခရီးသွားကုန်ကျစရိတ်မျက်နှာသို့၎င်း, $ 1,000 အမေရိကန်ဒေါ်လာ။
စျေးဝယ်ညာဘက်အားကစားကွင်းကနေယခုနှစ်ဘောလုံးရဲ့အကြီးမားဆုံးနေ့ကအနိုင်ရနှင့်ကြည့်ရှုရန်အဘို့အ ပို. ပင်အခွင့်အလမ်းတွေကိုယခုရှိပါတယ်။ တစ်ဦးဖြစ်လာပြီးနောက် Adorama VIP (ပြိုင်ပွဲသို့ဖောက်သည်အော်တို entry ကိုရရှိသွားတဲ့အရာ), 1,000 ကျော်ခြေစစ်ပွဲပစ္စည်းများကိုတစ်ရွေးချယ်ရေးကနေဂိမ်းနေ့သို့မဟုတ်ဆိုင်ဘို့မိမိတို့တီဗီ upgrade သူကိုဘောလုံးပရိတ်သတ်တွေ * ပြိုင်ပွဲသို့သုံးနောက်ထပ် entries တွေကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
* ခြေစစ်ပွဲအထူးအပေါ်ပိုပြီးအသေးစိတ်များနှင့်ပြည့်စုံသောဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေများအဘို့, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး တာဝန်ရှိသူတဦးကပြိုင်ပွဲစာမျက်နှာ ထိုအပေါ် Adorama website က။
ဂိမ်းနေ့အဘို့အတီဗီတစ်ခုရွေးချယ်ရေးအပေါ် upgrade နှင့်ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန် Big
တစ်ဦးခြေစစ်ပွဲတီဗီ purchasing အသုံးပြုပုံ Adorama အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေယခုပြိုင်ပွဲသို့ ပို. ပင် entries တွေကိုရနိုင်တယ်။ အရည်အချင်းပြည့်မီတီဗီပါဝင်သည်:
55 "1080p နဲ့ LED တီဗီ: 547.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
55 "UHD OLED TV ကို: 2999.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
65 "UHD OLED TV ကို: 4999.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
55 "UHD နဲ့ LED တီဗီ: 899.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
65 "UHD က IPS တီဗီ: 1997.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
48 "SUHD နဲ့ LED တီဗီ: 1397.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
48 အမေရိကန်ဒေါ်လာ: 797.99 "တီဗီ LED
65 "SUHD နဲ့ LED တီဗီ: 3197.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
55 "SUHD နဲ့ LED တီဗီ: 2197.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
78 "SUHD နဲ့ LED တီဗီ: 6997.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
အတူသွားကြဖို့ရာတီဗီသေချာမသိ? "Readသင့်ရဲ့ Next ကို TV ကဝယ်ယူမှလက်တွေ့လမ်းညွှန်"ဟုအဆိုပါပေါ် Adorama Center ကိုသင်ယူခြင်း။
အခမဲ့များအတွက် giveaway ရိုက်ထည့်ရန်, တစ်ဦး Adorama VIP ဖြစ်လာမှယခု sign up ကို တရားဝင်ပြိုင်ပွဲစာမျက်နှာပေါ်မှာ။ စျေးဝယ်လည်းအနိုင်ရ၏သုံးဆအခွင့်အလမ်းများအတွက်, တီဗီအပါအဝင်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုရွေးချယ်ရေး browse နှင့်ခြေစစ်ပွဲထုတ်ကုန်ဝယ်ယူရန်ဖိတ်ခေါ်နေကြသည်။ အရည်အချင်းပြည့်မီအမှတ်တံဆိပ် Acer က Apple, Asus က, Bose တို့ပါဝင်သည်, ကို Canon, Dell, အကာအရံ, Fujifilm, Intel ကသည် Lenovo, LG သည် Microsoft, Panasonic Pentax, Samsung SanDisk, Seagate, Sony က, Tamron, Wacom နှင့် WD ။
ADORAMA: တစ်သန်းပို ကင်မရာ Store က
Adorama ကင်မရာစတိုးဆိုင်ထက်ပိုမိုဖြစ်ပါသည် - ကကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဓာတ်ပုံ, ဗီဒီယို, အသံဖိုင်နှင့်ကွန်ပျူတာလက်လီအရောင်းဆိုင်များ၏တဦးတည်းပါပဲ။ ထက်ပိုမို 35 နှစ်ပေါင်းဖောက်သည်အမှုဆောင်ခြင်း, Adorama ပုံရိပ်နှင့်စားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်များအတွက်ဦးဆောင်အွန်လိုင်း destination သို့ထည့်သွင်းရန်သူ့ရဲ့ flagship နယူးယောက်စတိုးကနေစိုက်ပျိုးခဲ့သည်။ Adorama'' s ကို၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုများသည်တစ်ဦးအတွက်အိမ်သူအိမ်သားဓာတ်ပုံကိုဓာတ်ခွဲခန်း, AdoramaPix ပါဝင်သည်စဉ်ကျယ်ပြန့်ထုတ်ကုန်ဟာယပူဇော်သက္ကာ, အိမ်တွင်းဖျော်ဖြေမှု, မိုဘိုင်းကွန်ပျူတာနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗွီဒီယိုနဲ့အသံပတ်ဝိုင်း; အရင်းအမြစ်များနှင့်ဂီယာဓာတ်ပုံဆရာ, ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယို, အသံလွှင့်နဲ့ post အိမ်များအဘို့နှင့်မှတ်တမ်းတင်အနုပညာရှင်တဆင့် Adorama Pro ကို; မှာလိုလားသူပစ္စည်းကိရိယာများငှားရမ်း Adorama ငှားရမ်းခြင်းကုမ္ပဏီ; နှင့်ဆုရ Adorama ထိုကဲ့သို့သောနာမည်ကျော်အဖြစ်အွန်လိုင်းလိုင်းများအတွက်အခမဲ့ဖန်တီးမှုပညာရေးကမ်းလှမ်းထားတဲ့သင်ယူရေးစင်တာ, Adorama တီဗီ။
အလည်အပတ် ADORAMA at www.adorama.com.
Adorama ကြီးမားတဲ့ဂိမ်း ပြိုင်ပွဲ ဘောလုံး စွန့်ကြဲသည် NFL ရုပ်မြင်သံကြား TV ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2016-01-29
ယခင်: BVE 2016 မှာကို standalone သိုလှောင်မှုနဲ့သိမ်းဆည်းပလက်ဖောင်းစတင်ရန်ခရီးဆောင်လက်ဆွဲသေတ္တာကို TV
နောက်တစ်ခု: အဆင့်မြှင့် PrimeTime 1SLED XB2 LED ကို 95 + CRI ဘဝမှကယျတငျ